Maxaad noo - AlorAir
Maxaad u baahanahay in aan dhex rido a?
Horumarka technology riixin oo kaliya bulshada weerarka, laakiin sidoo kale kor loogu qaado wacyiga ee dayactirka. Taas macnaheedu waa in rido a oolnimada sare caawin karaan dadka qaba dehumidification hawada, iyo sidoo kale in la yareeyo kharashyada dayactirka mustaqbalka. Tusaale ahaan, qoyaan xad-dhaaf ah waxay keeni kartaa dhaawac qaali ah in qaabka iyo qaybaha dhismaha ah.
uumiga dhici kartaa in qofka goobta shaqada ama ku nool deegaanka. Iyadoo horay loo malaynayo in ay arrin dabiici ah, hadda waxaan ogahay in aan ka hortagi karaa waxyeellada daran ee uumiga.
► Xaggee Qoyaanka Excess ma timid?
Iyada oo ku xidhan heerkulka hawada, hawada qaban karaa xaddi gaar ah oo biyaha ku jira xaalad ah vaporous. Marka hawada qaboobeyso, awoodda ay biyaha ku celinayaan hoos u sida. Taas macnaheedu waa in hawada soo bandhigtay uumiga in ay dusha qabow, taas oo ah waxaa qoyay iyo uumiga aan aqoon.
► Waa maxay sababta Dooro dehumidifiers for Excess Qoyaanka?
* Burburka Dhismayaasha
dhismayaasha Wooden waa u nugul caaryada iyo qurun. In ka badan caaryada waqti iyo waxa qudhmay oo u horseedi karaa arrimaha, sida dabaq qalloocan iyo meegaarka albaabada loo sineyn.
15% ka mid ah dayactirka ah ee qaybo ka mid qoryo waxaa sababa qurun iyo caaryada. Tani waxay keenaysaa in ku saabsan 20 bilyan oo cagaha alwaax la wada baabbi'iyey, oo waa ka badan waxa dabka wax u geysto.
darbiyada bannaanka si fudud u nuugo kartaa qoyaanka sagxadaha ay. Marka heerkulka dusha sare yaraynaysaa xitaa ka sii badan, biyo dheeraad ah u nuugo, taasoo keentay in waxyeello wareeg.
Rido Siibnaa qoyaan xad-dhaaf ah ka deegaanka iyo caawiyaan qalabka heer qoyaan ku haboon. Tani waxay ka caawisaa in la yareeyo kharashka dayactirka iyo sii dhaawac caaryada ugu yaraan.
Daxalka ee birta waxay badanaa ka dhacdaa sababtoo ah qoyaan xad-dhaaf ah. Qoyska qalabka korontada iyo qaybaha korontada uma shaqeyn karto haddii ay u nuugo qoyaanka aad u badan ka soo hawada. Cuntada, daawo, buugaagta, iyo dhar ayaa sidoo kale u nugul yihiin in ay waxyeeleeyaan iyo waxa ay noqon karaan caaryaysatay ka qoyay.
Rido siin kara xal dhamaystiran oo dhamaan dhibaatooyinka aad kaydinta. Isticmaalka wax ku ool ah, si degdeg ah ku simaha dehumidifiers AlorAir hubisaa in waxaad leedahay oo dhan si fiican loo daryeelo.
* Cayayaanka ee injirta
jawi qoyan yihiin heer sare ah soo jiidasho leh si ay cayayaanka, sida Kadalaan, Qudhaanjadu, iyo baranbarada, inta badan ku nooshahay guriga aad loo ogaanin muddo dheer. injirta waxaa cayayaan waxay sababi kartaa waxyeello ballaaran gurigaaga iyo caafimaadka.
Rido si fudud u joogteyn karto heer qoyaan raaxo aad nool iyo meel shaqo. By wareegaya hawada qalalan iyo raaxo, waxa aad dhimi kartaa cayayaanka iyo in la wanaajiyo tayada hawada.
Gudaha heer qoyaan qaraabo of 60% ama wax ka sareeya aad bay u weynaan doonaa fursadaha caaryada, ama caariyaysi, iyo fangaska, taas oo ay baraaraan on alwaax, wasakh, kartoonada, iyo warqad.
Sida caaryada faafo, waxaa sii daayay malaayiin kudka hawada. Tani waxay keenaysaa in ur laga urin karo, oo aan fiicneyn, marka lagu daro sii kordhaysa halista ah ee xaalado caafimaad oo khatar ah.
rido A ku ool yareyn kartaa qoyaanka gudaha, ka dhigi deegaanka aad ku nooshahay raaxo badan, iyo in la yareeyo fursada of cudurro halis ah.
Waxaan jeclahay in aan Innovate!
AlorAir bixiyaa taxane ah oo IAQ iyo dehumidification xal sare iyada oo dehumidifiers, lacag geliya hawada, scrubbers hawada, iyo wax ka badan. waxyaabaha Our cusub oo loo isticmaali karaa in codsiyada kala duwan oo ka soo warshadaha in la deggan yahay. Hadafkeenu waa in aan marnaba joojin innovating in wax soo saarka ee aan bixino si macaamiisheena.
► gariiradda Advanced Abuur COP Sare
gariiradda The on dehumidifiers AlorAir yihiin ka badan ku gariiradda of rido a caadiga ah. Intaa waxaa dheer, ee gariiradda iyo design fin ka mid ah sifooyinka gaarka ah in aan la heli karin on jaban, dehumidifiers mass soo saaray. The gariiradda iyo kulayl Iskubedelka oversized ka saari kara 2-3 jeer sida qoyaan badan halkii kilowatt sida rido a caadiga ah. rido sare hufan AlorAir ayaa kor u badbaadiyay ilaa $ 250 halkii sanno ee qiimaha tamarta oo caadi ahaan socon doono 10+ sano la damaanad shan sano ah oo xadidan.
► Epoxy Powder daahan on gariiradda
Si looga fogaado baxsiga Freon, cillad dilaa, waayo, rido a, AlorAir ayaa soo bandhigay epoxy dahaarka gariiradda. Tani feature cusub oo kordhiyay nolosha gariiradda iyada oo bixisa ilaalinta bay'ada xoqe iyo dayactirka gudbin kulaylka gariiradda ee. Intaas waxaa sii dheer, oolnimada sare hawadda ee Rotary ay hubisaa in waxtarka ugu badan ee kharashka ugu hooseeya ee suuragalka.
► Bambooyin Condensate Duty culus
Bambooyin inta badan waxay leeyihiin arrimo khatar ah sida kulayl, ogaanshaha failure, iyo abuurmeena. Nasiib wanaag, injineerada our yeelatay bamka ah in ka badan ayaa lagu kalsoonaan karo waa. Iyadoo 'meel fog ka qaadista 20, bamka condensate ku siiyo xoriyad ay ku daadi meel kasta.
All xarkaha on bamka condensate AlorAir ayaa gelanayo xidha deg deg ah. Taas ayaa ka dhigaysa rakibaadda iyo dayactirka fudud oo degdeg badan.
► Access Quick inay ka Kooban Gudaha
All dehumidifiers AlorAir bixiyaan fududahay in qaybaha gudaha ee ay helaan. Taxanaha Storm wuxuu leeyahay cover clamshell ah halka Taxanaha Sentinel ku qalabeysan yahay darfaha helaan. Intaa waxaa dheer, bamka ayaa fiilooyinka xidha degdeg ah, sidaas darteed waxaa si fudud looga saari karaa oo aan helitaanka guddiga gacanta.
Our humidistat fog ka dhigaysa dehumidifiers AlorAir doorashada ku haboon, marka unit la ducted doonaa qol kale. humidistat ayaa sidoo kale kasoo muuqday koollo Jaha flanges optional, oo la yareeyo waqtiga rakibo marka xiran habka ducting ah.
► sensor la garab Air Design
All dehumidifiers AlorAir ka mid ah shidma qoyaan la garab Air Design, taasoo ka hortagaysa in baaskiil gaaban. Dareemayaal si fudud u saamayn kara kulaylka gudaha iyo huurka, iyaga nugul helo calaamadaha qaldan u yahay xoogga on ama off. Taa baddalkeeda, this koobaya dari ee hawadda iyo dhigaysa nidaamka refrigerant ku degganayn. Si loola arrintan, Air Design garab ogol shidma in la gabi ahaanba dahaaran kulaylka gudaha iyo qoyaan ka.
► Performance Board Main looga adkaan
Guddiga ayaa ugu muhiimsan ee si weyn u saameyn karaan waxqabadka aad dhex rido. Taas darteed, dhammaan loox circuit AlorAir waxaa dahaarka leh badbaadinta. Guddiga ayaa cadeyn loo furi oo adkaysi u magnetization. The qaybo iyo waxqabadka, oo loox kasta waa 100% tijaabiyey.
► Ductable Unit ka dhigaysa Your Life fududaynta
qoyska AlorAir ee dehumidifiers bixisaa accessories kala duwan balaadhan oo ah codsiyada. xirmooyinka koollo The ogolaan unugyada in la geeyaa meel fog, sida qol farsamo, iyo qol kale ee guriga ay gacanta ku. In codsiyada qaar ka mid ah, humidistat fog laga yaabaa in loo baahdo.
Sidee ma AlorAir Save Money Waxaad?
Xakamaynta heerarka qoyaanka gurigaaga waa fure u ah ilaalinta gurigaaga, caafimaadka, iyo qoyska. rido AlorAir waa xal la awoodi karo in dhibaato huurka aad. maalgashiga hore ee tayada hawada gudaha ka xoogbadan, la soo kabsaday karo dhowr sano ee kaydka tamarta ka dib.
COP sare ee dehumidifiers AlorAir ee waxaad badbaadin kartaa ilaa $ 250 in kharashka tamarta marka la barbar dhigo dehumidifiers caadiga ah. rido AlorAir An caadi ahaan socon doono 10+ sano iyo yimaado la damaanad shan sano ah oo xadidan. Taasi waa kayd ah oo la saadaaliyey ka yareeyo kharashka hawada gashay. Marka aad awoodo si ay u ilaaliyaan ah qoyaan qaraabo joogto ah 50% ama ka yar, aad HVAC ma yeelan doonaan in ay ka shaqeeyaan sidii ay adag tahay in ay sii heerkulka a raaxo leh.
Your maalgashiga rido AlorAir ah siin doonaa ma aha oo kaliya kaydka tamarta laakiin, waxay sidoo kale abuuri doontaa meel raaxo badan iyo caafimaad nool.
New Uzit Dib-u-tagaasida
qalabka AlorAir ee guraa waayo, dib u soo celinta iyo nadiifinta:
Helidda xalka ugu fiican noqon kartaa mid adag oo wareer ka iibsada u hureen. AlorAir ayaa sameeyay Baakado Celinta badan in:
1. Soo Celinta dhaawac biyaha
2. Speed-barasho caaryada
3. Yaree khidmada dayactirka ka dib markii daadka